Uluhlu lwam lokuBhloga lokuLungisa ... | Martech Zone
Kwiveki ephelileyo bendinesikofu noBrandon McGee, VP onebhanki iHuntington egxile Imali yeBhanki. Ibhlog kaBrandon inendawo entle yokukhangela kwiinjini yokukhangela- enkosi kumxholo wakhe wokugxila kunye niche engqongqo ebhloga ngayo.
Sincokole ngebhlog yakhe kwaye sade sathetha ngeselula okwexeshana, undibonelele ngengqondo epholileyo malunga nokuba eli shishini liyaphi kwaye kuyonwabisa. Nantsi ingqungquthela yencoko yethu - ndifuna ukwabelana ngayo nabo bonke abantu.
I-niche, niche, niche... encinci, encinci, encinci. Ndinekhwele kukhetho lukaBrandon kubloga. Ndihlala ndihlala nangona ukuphosa umnatha obanzi kungandizisela iintlanzi ezininzi; kodwa inyaniso ichasene kwaphela. Ngenxa yokuba andinayo i-niche eqinile, ndikhuphisana nezinye iisayithi ezininzi. UBrandon akanyanzelekanga ukuba akhuphisane (okwangoku). Kulabo bacinga ngokubhloga, zininzi ingxolo apha phandle ke zama ukufumana eyakho frequency!
Ukukhetha igama lesizinda. UBrandon okwangoku ubanjelwe iBlogger. Kulapho 'okwangoku' ithathela ingqalelo inqaku lam langaphambili. Ukuba umntu othile uthatha isigqibo sokubhloga malunga neebhanki ezihambayo kwaye bafaka igama elikhulu lesizinda, uBrandon unokutyhalwa ezantsi kwiphepha leziphumo zeNjini yokukhangela njengoko abanye abantu bevuka ngamagama esizinda ekujoliswe kuwo.
Umgcini ngokubamba. Ukhetho lukaBrandon kwiBlogger lwaluyinto entle yokumenza asebenze. Unendawo yakhe kwaye uhlala ebhloga kwizifundo ezilungileyo. Ibhlog ngokuqinisekileyo iyimpumelelo kwaye iyamkhuthaza. Nangona kunjalo, andicingi ukuba kuyamkhuthaza Nangona ku ingqalelo njengoko inokubakho ukuba angayisingatha ngokwakhe. Ukubamba iqonga njenge-WordPress kuyamvumela ukuba abeke umxholo wakhe kubume, enze ezinye nzulu zenjini yokukhangela, kunye nokuba 'ngabaphulaphuli' ababonisa indawo yabo kwindawo yakhe (endaweni yeziphazamiso zeBlogger).
Nanku omnye umzekelo endibonelele ngawo uBrandon, ukuba umxholo wakhe uboniswa njani kwifayile ye- SERP. Ukuba ujonga indlela ezithunyelwe ngayo kunye nezonxibelelwano kwi-Google, kukho into ebalulekileyo elahlekileyo:
Qaphela zonke iinkcazo zeposi? Akunyanzelisi kakhulu, akunjalo? NgeWordPress, iplagi enje nge Konke kwi-One SEO Pack ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso izicatshulwa ezinxulumene nezonxibelelwano zakho kuGoogle. Oku kukuvumela ukuba ubhale umxholo othile ekujolise kuwo, onamagama aphambili, kunye nokunyanzela oya kuthi uqhube ngakumbi ukucofa kwindawo yakho.
Nantsi indlela amakhonkco am ajongeka ngayo:
Andibhengezi ukuba ndingoyena mkhulu we-SEO, kodwa ukubanakho ukuguqula umxholo oboniswe kwisiphumo seNjini yokukhangela kubalulekile - zombini iinjini zokukhangela, kunye nabantu abazisebenzisayo.
Ukusukela ukuba i-ecommerce kunye neebhanki zabelana ngemicimbi efanayo yokuthobela kwaye zibonakala ziguquka kwiselfowuni, ndijonge phambili ekungeneni kwibhlog kaBrandon nzulu kancinci. Sele endikhombisile kwezinye izixhobo ezifanelekileyo zeshishini.
tags: izihloko zebhlogUBrandon McGeeizihloko zomxholoigama lethambekaUkubamba xa kuthelekiswa nokusingathwaIbhanki yaseHuntingtonzebhanki ezihambayonicheinyoka
Ngaba Imfundo Sisicombululo?
Ngaba iphepha lakho lokungabhalisi likhangeleka ngolu hlobo?
Mar 10, 2008 ngo 3:50 PM
Ngelixa ndivuma ukuba niche yindlela yokuhamba, ngokwembono yokuqalisa ibhlog ndicinga ukuba iyingozi.
Ndingathanda ngakumbi ukuphosa umnatha wam kancinci kwaye ndinciphise njengoko ibhlog yam iqhubeka… ndikrola i-niche yam. Njengendlela ekhuselekileyo eya empumelelweni.
Mar 10, 2008 ngo 4:43 PM
Ukuba bendinokukwenza konke oku, bendiya kuba nee-blog ezi-4 ukuya kwezi-6-enye inesihloko ngasinye. Ndicinga ukuba abantu bathengela ukutya ngendlela abathenga ngayo imveliso ... abayithathi ingxowa exubeneyo, bayayibamba ingxowa abayifunayo. 🙂
Oku kungandivumela ukuba ndigxile kumxholo wam kunye nokukhuthaza indawo. Ingxaki ngokuhamba ngomnatha obanzi kukuba usebenza ngenene ngokuchasene nazo zonke izinto esele zikho phaya. Andiqondi ukuba unika umxholo wakho ithuba elifanelekileyo.
Mar 11, 2008 ngo 12:35 PM
Ewe, eneneni ndiyayibona imbono yakho. Kwaye ngelixa kusenokuba nzima ukwakha ngaphambili, iya kubonelela ngentlawulo engcono ekuhambeni kwexesha. (Nantoni na ngokwenene)
Mar 13, 2008 ngo-4: 01 AM
Enkosi ngesikhumbuzo sawo onke kwiPakethe enye ye-SEO- ndicinga ukuba ndibhala ikopi kwiCandelo lesihloko kwisithuba esiphantsi kweTag?
Iminqweno emihle evela eNgilani!
Mar 13, 2008 ngo-10: 18 AM
Enkosi (kweli cala lechibi),
Mar 13, 2008 ngo-10: 25 AM
Enkosi Doug! 🙂
Ndiyathemba konke okuhle nawe. Ndikufundele iBhlog okwethutyana ngoku kwaye uyifumana iluncedo kakhulu, ke enkosi!
Mar 13, 2008 ngo 1:54 PM
Ndiwaxabisa nyhani amazwi anobubele, Jon! Ndibe ngumntu oxakekileyo mva nje ukuze ingxelo enje ingumthombo wamandla.
Meyi 2, 2008 kwi-10: 10 PM
Ndingathanda ukuthatha ikhredithi, kodwa iplagin yam yeSesmic eneneni iplagi esecaleni ukubonisa iividiyo zakho zokugqibela. Ndiyavuma-ngubani owakhe wabhala i-plugin ye-Seesmic plugins yingqondi!
Sep 30, 2010 kwi-10: 17 AM
Inqaku elikhulu, elifutshane.
Ndimtsha kublogi kwaye nditshintshele kumxholo weWordPress owabelwe ngokwakho obizwa ngokuba yiSuffusion enayo YONKE ENYE eyakhelwe kuyo. Kuhle.
Kananjalo enkosi ngezithuba.